Ngabe i-basil idinga ukunakekelwa ini ▷➡️ Postposmo | I-postposm
Ukubuka konke komhlaba
thuthukisa impilo yakho
qaphela isisindo sakho
Ukuzinakekela kanye Nobuhle
qala ibhizinisi lakho
Yikuphi ukunakekelwa okudingayo i-basil?
U-Iris Gamen | 06/06/2022 14:34 | Izimila
Esinye sezitshalo ezinamakha ezivame kakhulu ezindlini i-basil, kanye nokuba esinye sezithako eziyisisekelo zanoma iyiphi iresiphi. Kokuthunyelwe okukhona manje, Sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nalesi sitshalo, izakhiwo, izinhlobo futhi ngaphezu kwakho konke sizoxoxa ngokuthi yini i-basil edinga ukunakekelwa.
I-Basil isitshalo sangonyaka umsuka wayo utholakala eNdiya, Iran nakwezinye izindawo zase-Asia. Ukunakekelwa okuyisisekelo okudingekayo kulolu hlobo lwesitshalo kuyefana noma ngabe kusebhodweni noma kutshalwe emhlabathini. Umehluko usezicini zezakhi ezihambisana nayo, okungukuthi, i-substrate, nendawo eqhelile kuzo zonke ezinye izitshalo.
Lesi simila esimnandi, ikhuliswa ngezinyanga ezifudumele zonyaka, intwasahlobo nehlobo, njengoba ikhula kahle kakhulu emazingeni okushisa afudumele. Ngaphezu kwalokho, isebenza njengesixosha omiyane nezinye izinhlobo zezinambuzane, ezisebenza njengesithiyo sokuzivikela kwezinye izinhlobo zezitshalo, kokubili ukuhlobisa nokuqhakaza. I-Basil inezinto eziningi ezithokozisayo ngemuva kwayo, esizokwazi ngezansi.
1 Iyini i-basil?
2 I-Basil Origins
3 izinhlobo ze-basil
3.1 I-basil emnandi
3.2 IGenovese basil
3.3 i-basil yasethai
3.4 I-Neapolitan basil
3.5 basil lemon
3.6 i-lime basil
3.7 i-basil yesiGreki
4 Yikuphi ukunakekelwa okudingayo i-basil?
Kungowomndeni wakwaLamiaceae, ziyizitshalo eziqhakaza lapho singathola khona inqwaba yezizukulwane nezinhlobo ezahlukene. I-Basil iyingxenye yohlobo lwe-Ocimum, uhlobo olujwayelekile lwesimo sezulu esifudumele. Izinhlobo ezithile zaziwa ngokuthi i-Ocimum basilicum.
Kuyinto a isitshalo senkathi yonyaka, esingafinyeleli ukuphakama okukhulu, kodwa ububanzi. Iziqu zawo zimbozwe amaqabunga ama-oval anombala ohlaza oqinile wamasayizi ahlukahlukene.
Kunezinhlobo ezahlukene ze-basil, ezinye ezivame kakhulu ezindaweni zaseMedithera. Ezwekazini lase-Asia, izinhlobonhlobo ezingatholakala ziningi nakakhulu, zifinyelela izinhlobo ezinama-flavour ahluke kakhulu futhi aqinile.
Umlando walesi sitshalo awuqinisekile, kusukela kunemithombo ekhomba ukuthi kwakuyisitshalo esaziwayo esatshalwa ezinkulungwaneni zeminyaka edlule. Njengoba sike sasho ngaphambili, isitshalo esidabuka ezindaweni ezishisayo ezenzeka ezindaweni ezahlukene zase-Asia.
Ezwenikazi laseYurophu, ifika ngemizila yokuhweba esuka eNdiya. Ngokushesha, ukutshalwa kwalolu hlobo lwesitshalo kwakuzozinza ezindaweni zaseMedithera. Amaqabunga e-basil asetshenziswa njengesithako esisodwa ekhishini, kodwa futhi njengekhambi lokwelapha kanye nesiko.
Namuhla, ukutshalwa kwalolu hlobo lwezitshalo sekusabalele ezindaweni eziningi zomhlaba ngenxa yentuthuko yayo enhle kanye nemisebenzi yayo eyahlukene.
Kulesi sigaba, sizokhuluma nge izinhlobo ezivame kakhulu ze-basil, esinye sezitshalo ezinamakha asetshenziswa kakhulu ku-gastronomy futhi esingayithola kalula kunoma iyiphi i-greenhouse noma isitolo sengadi ukuze siyitshale endlini yethu.
Enye yezinhlobonhlobo ezithandwa kakhulu futhi ezisetshenziswa kakhulu ekhishini. Amaqabunga alezi zinhlobonhlobo aluhlaza kakhulu, athambile futhi anephunga elimnandi. Kulokhu, zifinyelela phakathi kwamasentimitha ayi-12 noma ayi-18 ukuphakama.
Isici esiyinhloko salolu hlobo yi- ukuma kwamaqabunga awo, ayisicaba futhi anamachashazi. Ukunambitheka kwamaqabunga awo, ngaphezu kokuba nephunga elimnandi, kunokuluma okuncane, okwenza kube uhlobo oluvame kakhulu lokudla kwe-Italian.
Itholakala ezindaweni eziseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iyisithako esidume kakhulu ekuphekeni kwayo. I-basil yaseThai ine-flavour engavamile kakhulu ye-liquorice. Kokubili iziqu namaqabunga alolu hlobo lwe-basil ahluke kakhulu ngenxa yamathoni ansomi. Kunconywa ukuthi uyisebenzise ngendlela entsha kangcono, ngoba ilahlekelwa iphunga layo elingavamile.
Njengoba igama layo libonisa, inemvelaphi e-Italy, ikakhulukazi esifundeni saseNaples. Amaqabunga alolu hlobo lwe-basil makhulu futhi asetshenziswa ezitsheni zase-Italy ezifana nesobho, inyama noma inhlanzi. Okukhethekile okuyihlukanisa kwezinye izinhlobo ngaphandle kobukhulu bamaqabunga ukuthi inokunambitheka okubabayo.
Enye yezinhlobo ezibaluleke kakhulu esingazithola ezweni lethu i-lemon basil. Amaqabunga athambile futhi anombala oluhlaza okhanyayo onamandla kakhulu, angafinyelela phakathi kwamasentimitha angama-20 noma angama-24 ubude. Isetshenziswa njenge-condiment ukwengeza ukuthinta kukalamula ezitsheni noma eziphuzweni.
Okufana nokubuka ngenhla, Ngenye yezinhlobo ezinambitheka kakhulu ezingatholakala, ukunambitheka okukhethekile kwewolintshi. Ukuze ukhule lezi zinhlobonhlobo, kufanele ukwenze endaweni ethola ukukhanya okungenani amahora ayisithupha ngosuku, ukuze isitshalo sikhule futhi sikhule ngaphandle kwenkinga.
Ekugcineni, sikulethela lezi zinhlobonhlobo, i-basil yesiGreki, isitshalo esingamasentimitha angu-8 noma angu-10 kuphela, okwenza kube enye yezincane ezingatholakala. Amaqabunga awo anomumo ocijile futhi asebenza njengokuhambisana nezitsha zenyama, inhlanzi, izitsha zemifino noma ngisho nesobho.
Uma unquma ukuba nalolu hlobo lwezitshalo engadini yakho noma ekhaya, kufanele uqaphele kuqala ukuthi isitshalo sesizini, ngakho lapho ukuphela komjikelezo wokuphila kwayo kufika, iyokoma ize ife.
Lo mjikelezo esikhuluma ngawo uqala lapho kuqala inkathi yasekwindla. Lapho amazinga okushisa eqala ukwehla, i-basil izobuna kancane kancane.. Ngokucabangela lokhu esisanda kubalula, lapho unakekela lezi zitshalo kufanele unake izici ezihlukahlukene.
Ukuqala ukutshala nokunakekela i-basil, okufanelekile ukwenza kanjalo ngokulungisa umbhede wembewu. Lokhu kungenziwa uma kuthengwa imbewu ye-basil hhayi isitshalo esivele sinezimbali. Uma ungenawo umbhede wembewu onawo, ungakwenza ngaphandle kwenkinga ebhodweni noma kumshini wokutshala.. Ithiphu esikunikeza yona uma uzokwenza ebhodweni, ukuthi ububanzi bayo bukhulu kunamasentimitha angu-12, bukhulu, ngaphandle kokudlulela, kungcono. Lokhu kungenxa yokuthi lesi sitshalo sivame ukukhula sibe banzi.
Isici sesibili okufanele usikhumbule yi- uhlobo lwe-substrate okufanele lusetshenziswe ngesikhathi sokutshala. Uma uzokwenza ezinkulisa, kukhona i-substrate ekhonjisiwe, uma ungayitholi ungafaka eyodwa yalolu hlobo lwezitshalo. Gcwalisa isitsha se-substrate ngaphandle kokusicindezela, kufanele usishiye sikhululekile futhi uthele amanzi amaningi kuso.
Imbewu oyibeka esitsheni ozosisebenzisa kufanele isakazwe yonke indawo, kufanele ihlukaniswe.. Uma kwenzeka ukuthi isitshalo sesivele sikhulile, qiniseka ukuthi ukuphakama okuhlala kukho yikona okufanelekile ukumboza nge-substrate. Izimpande zidinga umoya-mpilo okufanele, ngakho akufanele ziminyene.
Kufanele unisele ngokucophelela, ukuze amandla amanzi angenzi imisele noma ukususwa komhlaba. I-substrate kufanele ihlale imanzi, ngakho-ke kufanele uqaphele ukuthi kufanele unisele kaningi kangakanani lezi zitshalo. Uma isitshalo sakho singaphakathi endlini, kuzodingeka ukuthi usichelele nsuku zonke, uma singaphandle kungase kungabi njalo.
Ukukhanya kwelanga kubalulekile ekukhuleni kwabo, badinga izinga lokushisa elifudumele, yingakho kuyisitshalo senkathi eshisayo. Beka umbhede wembewu, noma ibhodwe, endaweni lapho ithola khona ukukhanya kwelanga, kodwa ingawutholi umoya.
Uma ugcina kokubili umswakama kanye nezinga lokushisa elikhonjisiwe kusukela ekuqaleni, isitshalo sizokhula nokuthuthukisa ngaphandle kwenkinga. Endabeni yembewu, ukuhluma kuzoqala maduze futhi imifino yokuqala izoqala ukuvela.
Ngokushesha nje lapho isitshalo sakho se-basil sinamapheya amabili noma amathathu amaqabunga aluhlaza, sekuyisikhathi sokusitshala embizeni yezilinganiso ezikhonjiswe ekuqaleni kwalesi sigaba. Kumele uqaphele kakhulu lapho wenza le nqubo, ugweme ukulimaza kokubili amaqabunga nezimpande. I-substrate oyisebenzisayo ingaba yendawo yonke noma ezitshalweni zangaphandle.
Iseluleko sokugcina sokunakekelwa esikunikeza sona yileso kufanele ufunde ukusithena ngendlela efanele. Kumele kwenziwe njalo nangezindlela ezehlukene, kuye ngokuthi ihlukumezekile, ukuntuleka kokukhanya noma sifuna ukuvuna. Njengomthetho ojwayelekile, lesi sitshalo sivame ukuthenwa ngesikhathi sokuvuna noma ngezizathu zokukhucululwa kwendle.
Ungenza a ukusika kancane kancane uma ufuna ukuvuna amaqabunga ukupheka noma ezinye izinjongo. Ukuze wenze lokhu, sikweluleka ukuthi usike isiqu, ushiye cishe amasentimitha ayi-10 ukuze sikwazi ukuvuselela. Uma, ngakolunye uhlangothi, ufuna a isihlahla sesitshalo kufanele sithenwe cishe ngamasentimitha ayi-10 noma ayi-15 ukusuka phansi lapho sitshalwe khona.
I-Basil ingahlushwa izifo, ukuhlaselwa yizinambuzane, ukulimala okubandayo, njll., okubangela ukuthi isitshalo sethu some noma sife. Kulezi zimo, kuhle ukuhlanza izingxenye zesitshalo esithintekile, ukuhlanza indawo ezungezile yenhlabathi ukuze kungene umoya kangcono futhi unikeze ukudla, umanyolo ukuze ukhuthaze ukukhula nokuvuselelwa.
Ngamafuphi, singasho ukuthi isitshalo se-basil silawulwa ngaphezu kwakho konke ngemithetho emithathu eyinhloko; ukukhanya okuningi namazinga okushisa afudumele, akukho zikhukhula, kodwa umswakama kanye nokuthenwa okuvamile kokukhucululwa kwendle.
Nakuba njengoba sesibonile, enye yezindlela eziyinhloko ezisetshenziswa ngayo i-basil i-aromatization kanye nokusetshenziswa kwayo ku-gastronomy, iphinde ibe nezindawo zokuthuthukisa impilo futhi njenge-anti-mosquito repellent. Lokhu kwenza basil ibalulekile ekhaya lethu.
Indlela ephelele ye-athikili: I-postposm » Izimila » Yikuphi ukunakekelwa okudingayo i-basil?
umlilo wesizukulwane sesithupha
UVeranillo de San Miguel
Nginike isikhathi sokuphumula